५ मिनेटमा तनाववाट मुक्त हुने ५ कदमहरु | Hamro Patro
नेपाली समय: 22:36:46
५ मिनेटमा तनाववाट मुक्त हुने ५ कदमहरु
Suyog Dhakal - May 12 2017
हामी सबैजना उर्जा र स्वउपचार पद्धतीमार्फत बनेका हौ । यदि सही तरिका र तवरले उर्जालाई प्रयोग गर्न सकेमा मानव शरीर आँफैले रोग र तनाववाट मुक्त पार्न सकिने कुराहरु पूर्विय दर्शन र पद्धतीले बताँउदछ । उदहारणका लागी शरीरमा सानो घाउ या चोट लागेमा हामीले निको होस् भनेँर सोच्न अगावै शरीरले रक्तश्राव बन्द गरिसकेको हुन्छ, यो एउटा स्वचालीत विज्ञान हो जुन हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
हामीसबैलाई तनाव छ, कार्यको, परिवारको, वाटोघाटो देखि लिएर खानेकुरासम्म सबैकुराहरु तनावो वृद्धी गर्ने खाले छन् तर के तनाव वाट हामी वच्न सक्दैनौ ? आउनुहोस ५ वटा सरल कदमका मार्फत आफूलाई तनाववाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ चर्चा गरौ है ।
यो पनि हेर्नुहोस् : दमका कारण, लक्षण र उपचार
स्वउपचार जटिल छैन, यि ५ वटा कदमका मार्फत तपाँईले आफ्नो शरीरलाई सम्पूर्ण रुपमा तनाव र अशान्ती वाट मुक्त पार्न सक्नुहुन्छ । फेरि यो कार्य यति सजिलो छ कि जस्तै टिभीमा कुनै नकारात्मक रिपोर्ट आईरहेको च्यानललाई एक झट्कामै सकारात्मक कुरा आएको च्यानलमा रिमोटले हामीले परिवर्तन गरेझै छ ।
ल यी पाँच कदमहरु यहाँ प्रस्तुत छन्, कृपया अबको पाँच मिनेट पढिसकेपछी अर्को पाँच मिनेट यी कदमहरुको अभ्यास गर्नुहोस र फरक थाहा पाउनुहोस् ।
सजिलो गरि बस्नुहोस र शरीरवाट आएको र गएको हरेक श्वाँसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस
यसो गर्दा श्वाँसका फोहोरा अनि तिन्को गहिराई कम वढी भएको या नभएको तर्फ तुलना गर्न नथाल्नुहोला, केवल आएको र गएको श्वाँसमा केन्द्रित गर्नुहोस ध्यानलाई । यसो गर्नाले तनाव उत्पन्न गर्ने विचारका श्रृखलाहरुलाई रोक्दछ र ध्यान शरीरमा केन्द्रत हुनपुग्दछ ।
आफ्ना दुबै हत्केलालाई अगाडि ल्याएर ३० देखि ६० सेकेन्डसम्म रगडनुहोस्
यसरी रगड्दा हुने घर्षणले हात ताते हुन्छ, यसरी घर्षण गर्दै गर्दा एकफेर मुस्काउने प्रयास पनि गरौँ है ।
दुबै हातहरुलाई एकअर्कासँग ६ देखि ८ ईन्च पर राख्नुहोस् । यसरी राख्दा एकअर्को हातलाई आमुन्ने सामुन्ने राख्नुहोला ।
हाम्रो शरीर भित्रको उर्जा यसो गर्दा हातमार्फत हामीले चाल पाँउछौ, उर्जाहरु हातको माध्यमवाट शरीरमा तरंगीएको हामीले थाहा पाँउदछौ । आफू भित्रको यो उर्जा चाल पाएपछी एकप्रकारको आत्मअनुभुती थाहा हुन्छ, हैन त ?
हातमा भएका ती उर्जालाई कुम हुँदै माथीसम्म अनुभव गर्न आँखा बन्द गर्नुहोस र अनुभव गर्नुहोस
हातमार्फत उर्जाशील उर्जाहरुलाई अब आँखा बन्द गरेर शरीर माथी जान दिनुहोस्, तपाँई भित्रको तनाव र पिडाहरु उर्जाकारुपमा शरीरवाट वाहिर गएको कल्पना गर्नुहोस, तपाँईमा सकारात्मक र उपचारात्मक उर्जा आउनेछ ।
यसरी प्राप्त सकारात्मक उर्जालाई शरीरको सबै अगं र भागहरुमा पठाउनुहोस्
यसरी प्राप्त भएको उर्जालाई शरीरको सम्पूर्ण अगंहरु, तनाव भएका ठाँउहरु आँखा, दिमाग, टाउको तर्फ सञ्चार गराउनुहोस् ।
ल अब प्रयास गरेर हामीलाई वताउनुहोस्, प्रस्तुत कदमहरु धेरैवटा अमेरिकी कम्पनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तनाव वाट मुक्त राख्दै शान्त र रचनात्मक वनाउनकालागी प्रयोग गर्न सल्लाह दिएका कदमहरु हुन् । ५ मिनेटमै तनाववाट मुक्त हुनुहोस् ।
हाम्रो हाम्रो पात्रोकालागी विभिन्न वेभसाईटको अध्यनका आधारमा